ရေတွင်းပျက် (သို.) ရင်တွင်းဖြစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ရေတွင်းပျက် (သို.) ရင်တွင်းဖြစ်
ရေတွင်းပျက် (သို.) ရင်တွင်းဖြစ်
Posted by ရွှေဘိုသား on Sep 1, 2011 in My Dear Diary | 29 comments
ချစ်တယ် မ ရယ်……။ ။
အစ်မ အမြဲရှိနေရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ
အစ်မနဲ. တူတူရှိနေတဲ.အချိန်တွေ ကျနော်ပျော်တယ်
တစ်ပတ်မှ တစ်ခါပဲ တွေ.ရတာ သိပ်မကျေနပ်ဘူး
အစ်မ အလုပ်နားတဲ. ရက်
အခုတော့ Pope Gregory 13 ကိုပဲ
စွဲလန်းလို့ တစ်နေ့မှ မေ့မရတဲ့
ကျနော့်ကိုယ်ကျနော့်ပဲ အပြစ်တင်ရမလား. . .
အစ်မ အနား တစ်ရံတစ်ခါနေခွင့်ရရင်
အစ်မနဲ့ အတူရှိခဲ့ရတဲ့ အချိန်တိုင်း
ဒါရင်ထဲကစကားတွေပါ ယုံကြည်ပေးပါနော်……. .
အဝေးတစ်နေရာ ရောက်နေလို. မလာနိုင်ခဲ.လည်း
ဒီကဗျာကိုတွေ.ရင် စာချန်ခဲ.ဖို. မမေ.ပါနဲ.နော်
ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကဗျာမလိုက်ဘူး…လို့ ထင်တယ်….
ငါတို့ရဲ့ တနင်္ဂနွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့
ရွှေဘို သား ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ Comment့ ကဗျာမလိုက်ဘူး…လို့ ထင်တယ်….
(ရွှေဘို သား ရေ..သီးခံပေးပေါ့ကွယ်.)
Comment ဖတ်နာလာရင်..အိုကေပြီ….ဆိုတာ ဆရာကြီးလုပ်ချင်တဲ့ ….ရွှေအိမ်စည် ကိုပြောတာ….
…..သူတပါးခံစားချက်ကို …..တန်ဖိုးထား
……ရွာသားတွေကိုလေး စား ………..နင်တွေ ငါတွေ ရပ်….
အဲ … ရွှေဘိုသားရေ … မင်းမရေးပဲသူ့ကို ရှဲဒိုးငှားလိုက်ရမှာ …
( ခံစားချက်နဲ့ ရေးတဲ့စာတွေကို ရင်နဲ့ဖတ်တဲ့ လူတွေပဲ နားလည်တာအပြင် …တခြားနှမ်းဖြူးတဲ့ လူတွေပါ… ကိုယ်ချင်းစာတတ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ … အဲ့ဒါပေါ့ … အပြောမတတ်တော့ ဆဲသလိုဆိုတာ …ငါလည်း မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ပြောမိပြန်ပြီ )
ကဗျာရေးသူရဲ့ ခံစားချက်ကို ရေးသူကိုယ်တိုင်ထက် ဘယ်သူမှပိုမသိနိုင်ပါဘူး
ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ရှဲဒိုးရေးခိုင်းတာထက် အခုလို မတက်တစ်တက်လေးရေးပြတာက ပိုကောင်းပါတယ် …
မမအိတုံ တွေ့လား ဟိုအောက်မှာ
အရက်သမား မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ဘာပြောတယ်ဆိုတာ
ဘာမှတ်သလဲလို့ ပြန်ပြောပလိုက်ပါလား မမအိတုံရဲ့
ကျွန်တော်က မမအိတုံရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တစ်ဦးပါခင်ဗျ
အဲ့သည် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ဆိုတဲ့
ဂေဇက်ထဲက မောင်းထုပ်ဘို့ တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျ
ကိုရင်တော့မသိစေနဲ့ …သူများကဗျာဆို..သရော်စာရေးဖို့ ကအဆင့်သင့်ဘဲ
တို့ တွေ ဘယ်လို့ ကဗျာကိုဆက်ထုံးလည်းပြောပြမယ်…
ဧဒင်ဥယျာဉ်မှာတော့..အကုန်ဝိုင်းသင်းပေးပါတယ်.ကိုရင်တို့ .ကိုကကြီးတို့ လည်းရှိနေတယ်လေ
မမေ.ပါနဲ.နော်…တဲ့ မောင်ကပြောထားခဲ့ ပါရဲ့ 
မင်းရင်အုံထဲ ..အစ်မ ရောက်ရောက်သွားတတ်တာမို့…..
မင်းဟာ ငါ့အသည်းမှာ တထပ်တည်းပါလို့
ဒီလိုပြန်ရေးပေမဲ့ ဒါက..တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကူညီတဲ့ သဘောပါဘဲ..
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်….ဆရာကြီးတွေ မဟုတ်ဘူးပေါ့..ကူးညှိတာ…
အဲ့ သလိုအပြန်ရေးရင်..နဲ့ …တတ်လာပါတယ်…
ကဗျာဆရာကြီးတွေ စာတော့..တို့ တွေ ကမှီငြမ်းပေါ့…
စိတ်ညစ်လိုက်တာ .. တကယ့်ကို အာရုံပဲ … ။
ဓါတ်ဆီတွေ ချည်းပဲ ဟွန်းးးးးးးးးးးးး
ဟယ် ကိုကြောင်ကြီးလုပ်ချလိုက်မှပျက်ပါလေရောဟယ်။ရွှေဘိုသားရေ မ နဲ့ အဆင်ပြေပါစေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။
ရွှေဘိုသား ပြောတဲ့သူ စာချန်ခဲ့ပြီလား ?
“မောင်” လို့တောင် ခေါ်မှတော့ “မ” ဆို ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်
အမ နဲ့ မောင် ဆိုတော့ တမျိုးများ ဖြစ်နေသလားလို့
ဒါကတော့ ခံစားချက်ထဲက အနှစ်တွေဖြစ်နေလို့နေမှာပေါ့။ ခံစားတတ်သူတိုင်း နားလည်ပေးလိုက်ပါ။ ကြည့်ရတဲ့ပုံက အစ်မလို ခင်ရကနေ မ လို့ ခေါ်ခွင့်ရအောင် ကြိုးစားနေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကြူတောသားဆိုတော့လည်း အားရပါးရ ခေါ်တာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။
ရွှေဘိုသားလုံးဝမလျှော့ နဲ့ အစ်မ…
တို့့ကကောင်လေး လို့ ရေးပေးခဲ့ တာတမင်ပေါ့…
သူ က…ရေးပြပါလိမ့်မယ်..ကဗျာကိုစက်နဲ့ ထုတ်ထားသလားမှတ်ရအောင်ပါဘဲ….
အသည်းသာကွဲ ကြည့်..ဟား…..ဘာပြောကောင်းမလဲ..ကဗျာတွေ ဖတ်ရင်..မျက်ရည်တောင်ကျနိုင်တယ်…
ကိုဟယ်ရီဆိုတဲ့ သူက…..သင်ပေးတယ်..အယူအဆအတွေးတွေ ပေါ့
ိသိချင်စိတ် သိပ်ပြင်းပျနေလို့ မေးလိုက်ပါဦးမယ် … ရွှေအိမ်စည်ကို အဲ့ဒီလို နင်တွေ ၊ ငါတွေ တချိန်လုံးပြောတတ်အောင် သင်ပေးတာ ဘယ် စာပေစကားဝိုင်းကလဲ ။
အသက်ရွယ်အပိုင်းခြား ဘယ်လောက်ရှိမလဲ မသိပေမဲ့ မျက်စိထဲ မြင်နေရတဲ့ နင်တွေ ငါတွေ ..အရေးသားက .. အတော် ထော်လော် ကန့်လန့် နိုင်နေတယ် … ။ ဒီဆိုက်ထဲမှာရေးနေတဲ့လူတွေထဲ သက်ကြီးပိုင်းတွေ ၊ သတ်လတ်ပိုင်တွေ အများကြီးရှိတယ် …။
ကလေးတွေကို ပြုစုပေးနေတဲ့ … အသက်သုံးဆယ့်ငါးနှစ်လောက်ရှိတဲ့ ဆရာမလိုလို … (ဒါလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး .. ဆရာမတွေ စကားပြောလျှင် ဒီလို အသုံးနှုန်းမသုံးဘူး )
ဘော်ဒါဆောင်ဖွင့်ထားတဲ့ သူလိုလို … (ဒါလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး … ဘော်ဒါဆောင်ဖွင့်တဲ့လူတွေ ဒီလောက်အားပြီး စာတွေ အများကြီး မရေးနိုင်ဘူး .. )
မြီးကောင်ပေါက် ယောက်ျားလုံးမလိုလို …. ( တစ်ခါတစ်ခါလည်း မိန်းမဆန်ဆန် … တစ်ခါတစ်ခါလည်း ယောကျာ်းဆန်ဆန်… ) ကိုယ့်ကာရိုက်တာ အမှန်က ဘာဖြစ်ဖြစ် … သူများ စိတ်အနှောက်ယှက်မဖြစ်အောင် နေဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်… ။ အလကားနေရင်း ပွဲဆူအောင် ထမလုပ်ပါနဲ့ …. ။ မနေနိုင်တဲ့လူက ထပြောတော့ အပေါက်ဆိုးတယ် ဖြစ်ဦးမယ်
မေးသင့် ပါတယ် မetone ရေ။ ရွာသူ/သား တွေအတွက်သူကြီးကိုယ်တိုင် ကလဲ မေးသင့်တာပြောသင့်တာ ပေါ့နော်။
ဘယ်သူ…ပြောပြော…မျက်နှာပြောင်တိုက်ဆက်ပြောနေတာကလဲ …စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စရာ ကောင်း ပါတယ်။
ပြောသင့် ပြောထိုက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ပြောတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်
လူအများ ၀င်ထွက် သွားလာနေသော ရွာပါ ၊
” အမ ဆိုရင် ကျနော်၊ မ ဆိုရင် မောင်” လို့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကို ဖြည့်ဖတ်လိုက်တယ်။
ဝေဖန်တဲ.သူတွေရော အားပေးတဲ.သူတွေရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
မရေးတက်သေးတော. ဒီလိုပဲ ဖြစ်မယ်လို. ကျနော်ကြိုတွက်ပြီးသားပါ ဘယ်သူ.ကိုမှ စ်ိတ်ထဲမထားပါဘူး
ရွှေဘိုသားရေ …စ်ိတ်ထဲမထားတာ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။
စေတနာမှန်လား………ဆရာကြီးလုပ်ချင်လို့ မျက်နှာပြောင်တိုက်ဆရာလုပ်တဲ့ လူလား….ဆိုတာ တရွာလုံးနားလည် ပါတယ်ဗျာ။
ဆရာဆိုတာ.. သူတပါးခံစားချက်ကို နားလည်ပေးနိုင်ရပါတယ်…..တန်ဖိုးထားပေးနိုင်ရပါတယ်။
စေတနာမှန် ရင်အများရှေ့မှာ…..ခုလို မလုပ်ပါဘူး။
ယုံကြည်မှုလွန်ကဲပြီး မှားတဲ့အမှားလို့ ဆိုပါ ရစေ။
အို ရွှေဘိုသား ရေ
လဘက်ခြောက် နဲ့ 
ရေတွင်းပျက်ဆိုမှတော့ ရေ မထွက်တော့ဘူးပေါ့ကွယ်…။ အဲဒိလိုပဲ မှတ်လိုက်တော့မယ်..။ စာလည်းချန်ခဲ့ရသေးတယ်…။ ဟိုလိုဒီလိုလည်း မပြောနဲ့ကွယ်…။
” ဓါတ်ပုံရယ် ….စာရယ် …..ကဗျာရယ်…။ အစုံအလင်ပါကွယ်………. သူကျတော့ စာပြန်မရေးးးးးးးးးး”
အဲဒိသီချင်းလေး သတိရသွားတယ်…… ရွှေဘိုသားရေ…………. ကျေးဇူးနော်…။( ကောင်၏ ကောင်း၏ ဂွဒ်ထ ဂွဒ်ထ ) အကြိမ်ထောင်ချီ ပြောသွားသည်……….။
ဂွတ်ရင်လည်း နောက်နေ. ကျနော်တို.ရွာက ကောက်စိုက်သမလေးတွေအကြောင်း
ရေတွင်းပျက်မမကိုမှ မရရင်ရေငတ်ပြီးဘဲ လျှောတော့မလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့
ကိုယ်တို့ နိုင်ငံကိုက ကောက်စိုက်သမ လေးတွေ ရှိနေလို့ ဆန်စားနေရတာပဲ …။ ရွှေဘိုသားရေ…။ သူတို့ကိုလည်း ဂုဏ်ပြုရမှာပေါ့…။ ကြိုဆိုနေပါတယ်…။ ဒါပေမဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ပြီးနားလည်ဖို့ သူ့ရင်ဘတ်နဲ့ ကိုယ့်ရင်ဘတ် ဂျက်ပင်ထိုးပြီး ဖတ်မှနားလည်နိုင်တယ် ကွယ့်…။ အဲဒါ ကွယ်လွန်သူကဗျာ ဆရာကြီး မောင်ချောနွယ်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေ…။ ပို့စ်ထဲမှာ မဟုတ်လို့ ထည့်သုံးလိုက်တာ…။ ပို့စ်ထဲမှာတော့ သူများသုံးပြီးသား ထည့်မသုံးပါဘူး…။ လိုအပ်ရင်လည်း ဘယ်သူပြောခဲ့တာပါလို့ ညွှန်းပြီးထည့်ရေးပါတယ်..။ ဒါက လိုက်နာစောင့်ထိမ်းအပ်တဲ့ ဥပဒေ ချမှတ်မထားတဲ့ အနုပညာစည်းကမ်းတစ်ခုပါ…။
ထားပါတော. မေတ္တာနဲ.ပဲ တုံ.ပြန်လိုက်ပါတယ်
စိတ်ထဲမထားချင်ပါဘူး သူများအမှိုက်ထုပ် ကိုလည်းကူးပြောင်းမယူချင်လို.